Ku dabbaaldeg Maalinta Beerka Caalamiga ah ee Marijuana Beers, Mocktails iyo Cabbitaannada leh Beddel THC ah • Dawooyinka Inc.eu
U dabbaaldeg maalinta Beer Caalamiga ah oo leh meelihii xashiishka, Mocktails iyo cabbitaannada leh beddelka THC
Maalinta biirka ee caalamiga ah, oo ka bilaabatay 2007, waxay dhacdaa sanad walba Jimcaha ugu horreeya bisha Agoosto (2 Agoosto sannadkan). Dabaaldegii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay 2008, laakiin tan iyo markaas wuxuu ku faafay in kabadan magaalooyin 200 oo ku yaal 80 dalal kala duwan oo adduunka ah.
1 Saddex siyaabood oo loogu dabaaldego maalinta khamriga ee caalamiga ah
2 Sidee looga dabaaldegi karaa Maalintan Caalamiga ah ee Beer, iyo waxyaabo kale?
3 Kabaxidda Ceria C
4 John Dankly
6 Biyaha THC Seltzer & Soda
7 Mocktails adiga kuu gaar ah
Saddex siyaabood oo loogu dabaaldego maalinta khamriga ee caalamiga ah
Markii International Beer Day la aas aasay Jesse Avshalmov, wuxuu sharaxay seddex qaab oo loogu dabaaldego Maalinta Beer International:
"Si aan ula kulanno asxaabta oo aan ugu raaxeysto dhadhanka biirka."
"Si loo qadariyo oo loo dabaaldego ragga iyo dumarka dadaalka badan ee sameeya una adeegaya biirkeena."
"In la isu keeno adduunka iyada oo loo dabaaldegayo biirka waddammada iyo dhaqamada oo dhan maalintan weyn."
Marka hirarka kuleylka ay ku dhacaan oo aadan qaboojiye haysanin, waxaad heysataa dhowr ikhtiyaar oo keliya: Raadi barkadda dabbaasha ee kuugu dhow, u tag filim ku yaal masraxa filimka barafoobay ama wax cab qabow. Inbadan oo inaga mid ah tani waxay ka dhigan tahay biir baraf leh ama is biirsaday, laakiin qof waliba ma jecla khamriga.
Sidee looga dabaaldegi karaa Maalintan Caalamiga ah ee Beer, iyo waxyaabo kale?
Sidayada oo kale hore u qoray dadka aadka u kululaaday waxay rabaan inay ku nastaan ​​daroogada cannabis inta kale ee saaxiibbadooduna wax cabbaan, laakiin had iyo jeer uma sameyn karaan tan dambi la'aan; Waqtiyadu way is beddeli karaan, laakiin sigaar cabista badanaa waxay khalkhal gelisaa dadka kale, wax alla wixii ku jira waraaqahaas. Laakiin waxaa jira waxyaabo kale: si lagaaga caawiyo in aad qallalan jiilaalkaan, halkan waxaa ku yaal shan beersis canugis ah, mocktails, iyo cabbitaanno kale.
Kabaxidda Ceria C
Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxaysato diyaargarowga faraxsanaanta saaxiibbadaada. Marka hore THC-kastoo shirkad beero lagu daray oo laga suuq geeyay Colorado Ceria waxaa aasaasay abuuraha Blue Moon Keith Villa. Astaantan ayaa loo soo bandhigay farmasiyada sanadkii la soo dhaafay waxayna haatan iibisaa biir cadaan ah oo u eg Beljamka, iyada oo qorshuhu yahay in la soo saaro shaashadda Maraykanka iyo IPA mustaqbalka dhow Biirku waxaa loo kariyaa sida caruusadda shaciir dhaqameedka ah, laakiin khamriga waa laga saaraa oo markii dambe ayaa lagu beddelaa THC.
Marka ay timaado cabitaannada cabbitaannada leh, way adag tahay in lagu garaaco John Daly - oo loo yaqaan 'Arnold Palmer' oo leh vodka. Isku darka macaan, sonkorta leh ee shaaha barafka leh iyo liin dhanaanta ayaa qoyaan badan ka helay iyo banaanka goobta golf-ka maalin kulul oo xagaaga ah, oo hadda waxaad ka heli kartaa bucshiro THC ah. Adigaa iska leh ama mid soo iibso Dixie Badh & Badh, isku dar ah liin macaan, shaah la cuni karo iyo THC.
Miyaad u dulqaadataa inaad ku raaxaysatid galaas buuxa? Baarayaasha ayaa sidoo kale leh wax u dhigma toogasho waxayna wataan tiro aad u yar oo ah THC oo loogu talagalay microdosing iyo sidoo kale dulqaad hoose iyo sare. Waxaad isku dayi kartaa inaad isku shaandheysid Red Bull iyo vodka wadada a Xaraashka tamarta Zoots, ka furnaato maalin adag oo leh nasasho habeenkii ah Magic Buzz, ama ku raaxayso is biirsad diyaarsan oo laga sameeyay cannabis Kalvara.
THC Seltzer & Biyaha Soodhaha
Guusha LaCroix iyo waxyaalaha lagu buufiyo sida kuwa loo yaqaan 'White Claw', waxay ahayd waqti uun ka hor inta ay biyuhu karbaashku yimaadaan. Shirkadaha jecel Fhyx iyo Oh Hi (oo ay iskaashadeen milkiilaha shirkadda Ska Brewing iyo milkiileyaasha farmashiyaha Durango Organics) waxay ka dhigaan kuwo ku dhalaali kara miro dhalashada Mareykanka illaa xNUMX miligram oo THC ah iyo ayaa horeyba loogu iibin jiray boqolaal dukaanno haramaha lagu keydiyo xagaagan.
Mocktails adiga kuu gaar ah
Ma jeceshahay cabitaannada baakadaha ku jira? Kadib sameys mocktail xashiish ah. Noocyada yar yar iyo budada qalloocan ee xoogga la saaray CBD iyo / ama THC samee cabitaano faleebo runtii neecaw… waadna hagaajin kartaa qiyaasta si aad ugu haboonaato baahiyahaaga. Fiiri qaar ka mid ah THC fikradaha mocktail ee xirfadleyda dhiirigelin.
Ka akhriso faahfaahin dheeraad ah WestWord (EN, ilaha) iyo TGS Colorado (EN, ilaha)
AmericacannabisCBDsaliid cbdsharci ahaanTHCMaraykankacuntoAdduunka oo dhan
Kani waa farqiga u dhexeeya CBD iyo CBG
Ka leexo, CBD! CBG waxay umuuqataa inuu yahay kan ugu cusub ee cannabinoid si loo helo dareenka qof walba ...
Xashiishadda iyo iibiyaasha kalluunka ayaa sii kordha iyada oo dadku ay ka go'doomaan viruska corona
Mareykanka - Isgoyska dillaaca caalamiga ah ee COVID-19 iyo shirkadaha marijuana ee Mareykanka ...
Horumarinta caalamiga ah ee ku saabsan CBD iyo cannabis
Waxaa qoray: mr Kaj Hollemans, KH Talo Sharci Marka ay timaado siyaasada daroogada ee caalamiga ah, a